ITyhilwe iNokia 9: Zonke izinto eziVuzisiweyo Iindaba zeGajethi
URuben inyongo | | Iiselfowuni
INokia 9 iya kuba yeyona ndawo iphambili yenkampani eyazalwa ngokutsha njengePhoenix. Yenza njalo ngesandla se-HMD Global, enye inkampani ebheja kakhulu kwicandelo esele inamaqela amaninzi kwimarike. Sasisazi ukuba ikrele elitsha lokuqala laseNorse kwakufuneka livele kwangoko. Kwaye ngaphambi kokuba yenzeke-kwaye njengesiqhelo-izinto ezimangazayo azide zihlale kude kube sekupheleni: Iphepha lobuchwephesha lakwaNokia 9 libhengezwe ngokweenkcukacha ezinkulu.
Ukusuka Gizmochina Iindaba zokuvuza zivakala kuthi. Asazi ukuba umqondiso uvumelekile na, kodwa siyabheja kunjalo. Kodwa ke, ukwenza uphononongo olukhawulezileyo lwento evuza, siza kukuxelela ukuba liqela elingayi kuqatshelwa kwintengiso. Kwaye hayi kangako kuyilo lwayo, kodwa ngenxa yeempawu zayo ezinamandla; ikhamera yakho eme phezulu; kunye neetekhnoloji ezisetyenzisiweyo.
1 Iscreen seNokia 9 kunye namandla
2 Ikhamera yesithathu yesenzi kunye ne-flash hybrid
3 Ibhetri elungileyo kunye ne-IP68 eqinisekisiweyo
4 I-Android ukuya ekugqibeleni kunye nokucinywa kwejack yeaudio
Iscreen seNokia 9 kunye namandla
Kuqala, iNokia 9 ekucaciswe ukuba iyavuza iya kuba nescreen se-intshi ye-6,01, nangona ubukhulu bayo bungekho bukhulu kangako; uphawu lwakho olo iya kuba siscreen se-6-intshi kwifom ye-5,5-intshi. Kwakhona, kwaye singashiywa ngasemva ekulweni, itekhnoloji esetyenzisiweyo iya kuba yi-AMOLED, efanayo njengoko sinokubona kwiibhejethi ezinkulu zeApple okanye i-Samsung.
Okwangoku, kwicala lamandla, umngcipheko weNokia kunye nendawo yeQualcomm chip, i Snapdragon 845; Oko kukuthi, imodeli yomlenze omnyama igcinelwe iimodeli zodidi oluphezulu kwicandelo. Oku kuya kuhamba kunye ne I-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi - akukho slot yememori khadi ekhankanyiweyo.
Ikhamera yesithathu yesenzi kunye ne-flash hybrid
Ukuba ubucinga ukuba iHuawei P20 Pro izakuba kukuphela kwesiphelo kulo nyaka sokudibanisa iisenzi ezintathu kwikhamera yayo ephambili, ubuphosakele. Kwaye kukuba kwiphepha ledatha, iNokia iya kuba neenzwa ezintathu: Ii-megapixels ezingama-41, ii-megapixels ezingama-20 kunye nee-megapixels eziyi-9,7. Okwesibini kuya kuba yiTV kwaye eyokugqibela iya kuba yi-monochrome. Asazi ngokuqinisekileyo ukuba iya kuziphatha njani, kodwa namhlanje iqela leHuawei liloluvo kwicandelo lokufota. Ukongeza, kwicandelo lokukhanyisa, iqela liya kuba nenkqubo ye-hybrid: i-Xenon flash kunye ne-LED flash.
Kwelinye icala, ikhamera yakho yangaphambili iya kuba nenzwa Isisombululo se-megapixel ezingama-21 kwaye iya kuhlala, njengesiqhelo, kugxilwe kuyo uqobo kunye neefowuni zevidiyo. Iifilitha kunye nee-emoticon ngokuqinisekileyo zinokusetyenziswa kwiziphumo zokugqibela, kodwa ngenxa yoku kuyakufuneka silinde inkampani ukuba iyazise ngokusemthethweni.
Ibhetri elungileyo kunye ne-IP68 eqinisekisiweyo
Ibhetri yeNokia 9, ephepheni, ineenombolo ezilungileyo. Umthamo weyunithi yokudityaniswa Iimitha ezingama-3.900 kwaye amanani okuzimela anikezelwa kwikhadi elihluziweyo yile: iiyure ezingama-24 zencoko; Ukulinda iiyure ezingama-565; Iiyure ezili-13 zokudlala umculo we-MP3; Iiyure ezili-12 zokudlala ividiyo.
Kwelinye icala, le Nokia 9 iya kuba yimodeli enokumelana nothuli namanzi. Ngaphezu koko, ine-IP68 yokuqinisekiswa-enye ngaphezu kwe-iPhone. Ngale nto kufuneka ibambe 1,5 yeemitha ubunzulu kangangemizuzu engama-30.
I-Android ukuya ekugqibeleni kunye nokucinywa kwejack yeaudio
Ingabonakala ngathi iyabudenge, kodwa iNokia yenye yeenkampani ezinyamekela umba wohlaziyo lwezixhobo zazo. Kwaye akunamsebenzi nokuba kuluhlu lokufaka, oluphakathi okanye oluphezulu; Bonke bafumana ukuphuculwa kwenguqulelo yamva nje ye-Android. Le Nokia 9 iya kubheja kuhlobo lwamva lweqonga le-android eliluhlaza: I-Android 8.1 Oreo.
Okokugqibela, sayifumana inomdla woku INokia iye yanikezela nge-3,5-millimeter jack yomsindo kwimodeli yayo yamva nje- siza kubona ukuba oku kuqinisekisiwe. Kwaye kubonisiwe ukuba ukumamela umculo kuyenzeka usebenzisa ii-headphone zeBluetooth okanye ngezibuko le-USB-C ngenxa yesiguquli se-USB-C ukuya kwi-3,5 mm jack.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » ITyhilwe iNokia 9: Zonke izinto eziVuzisiweyo
ILogitech Harmony 950, indawo ekude ukulawula zonke izixhobo zakho [UHLAHLELO]
Ii-Instagram apps zomntu wesithathu ziyeke ukusebenza ngenxa yotshintsho lwe-API